Third Party Appointments isiZulu
​UMHLAHLANDLELA WOKUQOKA ABANYE (I-AA88)
Ukhomishana woPhiko Lwezekuqoqwa Kwentela (u-SARS) unamandla okuqoka noma yimuphi umuntu (obizwa ngomxhumanisi) ukukhokha imali yentela esele, eselile kumkhokhintela, nganoma yiyiphi imali ayibambile egameni lomkhokhintela lowo.
Ukuqokwa komxhumanisi kwenziwa ngokuqoka omunye okusetshenziswana naye ukuba abe ngumxhumanisi ngokukhipha Isaziso Sokuqoka Omunye (AA88) lapho umuntu ebambe imali egameni lomkhikhintela. Izibonelo zabaxhumanisi ezingaqokwa kungaba ngabaqashi, izikhungo zezimali njengamabhange futhi kungahlanganiswa nezikhwama, izinkampani zemishwalense, abasingathi botshalomali, abameli kanye nabamkweletayo.
Ukuhlalukiswa Kwezidingo Zasebhizinisini: Uhlelo kanye nokuhlalukiswa kwefayela le-CSV Lokuqokwa Komunye (AA88) luveza imininingwane yohlelo kanye nendlela ifayela elakheke ngayo ukuze kuthekelwe imininingwane lwe-AA88 l [email protected]™ Employer.
Lokhu kufanele kukhokhwe kanjani futhi nini?
Usuku lokugcina lokukhokhwa luzovela kwi-AA88 ezothunyelwa kulowo mxhumanisi okuqondene naye.
Yilezi zindlela zokukhokha ezikhona :
Ukukhokha ngesheke kungedlule ku-R50 000. Lo mkhawulo usebenza noma ngabe kukhokhelwa izikhathi ezingaki zesikathi sentela, kumbe umakukhokhwa ngamasheke amaningi.
Ngemininingwane yakamuva ye-AA88 cindezela lapha
Last Updated: 28/06/2016 3:13 PM ​